Wasiiradii Dowladda Federaalku u dirtay magaalada Jowhar oo wada kulamadii u dambeeyey[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasiiradii Dowladda Federaalku u dirtay magaalada Jowhar oo wada kulamadii u dambeeyey[Sawirro]
JOWHAR – Wasiiro ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya ee shalay gaaray magaalada Jowhar si ay xal uga keenaan xiisada ka taagan maamulka Hirshabeella ayaa kulamo la qaatay dhinacyada xiisadu u dhaxeyso.
Wasiiradan ayaa maanta oo Jimce ah dib ugu noqday magaalada Muqdisho.
Wasiiradan ayaa kulan la qaatay Sii-haya xilka Madaxweynaha ahna maamulka Hirshabeella Cali Guudlaawe,Guddoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaanada,iyagoona kawada hadlay xiisada ka dhalatay xil ka qaadista Madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi Cosoble.
Sidoo kale Wasiirada ayaa kulan la yeeshay Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer Hirshabeelle,iyagoona si qoto dheer uga hadlay xiisada iyo sidii xal loogu heli lahaa.
Wasiiradan ayaa dhanka kale kulan albaabadu u xirnaa la yeeshay Madaxweynihii xilka laga qaaday Cali Cabdullaahi Cosoble ,waxaana si rasmi ah loo ogayn arrimaha ay kawada hadleen.
Wasiirada Arrimaha Gudaha iyo Amniga ayaa u sheegay Xildhibaanada in ay u yimaadeen magaalada Jowhar sidii ay u qiimeyn lahaayeen xaalada ,wixii ay kala kulmeena ay dib ula laabanayaan Madaxda Federaalka.